Umlingisi Leyn Devis: Biography, ukuphila siqu. izindima engcono
Fans of the uchungechunge edumile "Santa Barbara", ochungechungeni lokuqala aphuma ngo-1984, uzokhumbula uhlamvu enjalo amasafire Mason Capwell. Leyn Devis - umlingisi wokuqala ukudlala le indima eziyinselele. Kuyinto ngenxa engasenathonya sakhe futhi ithalente kanye nezethameli wathandana umfanekiso eyizibulo Billionaire. Yini esiyaziyo esidlule American, ukuphila kwakhe siqu futhi umsebenzi?
Leyn Devis: ebuntwaneni
Ikusasa Mason wazalwa American esifundazweni saseGeorgia, kwaba senzakalo esijabulisayo ngo-1950. Leyn Devis ingenye abantu engibathandayo phetho selihlanganise umsebenzi wokudala. Umama womfana kwaba umdlali waseshashalazini, eyaziwa emibuthanweni waseshashalazini, uyise basebenzile somsakazi. Zonke amadodana amathathu oshadile Davis ngokoqobo wachitha esengumntwana ekusithekeni. Izingane zivame abaphathiswe imithwalo yemfanelo ehlobene ne ekudalweni futhi ukufakwa kwenkundla.
Leyn Devis kusenesikhathi wabona ukuthi ubani afuna ukuba abe umuntu omdala. Ngesikhathi esafunda esikoleni samabanga aphakeme, lo mfana ezama isandla sakhe sibonga esiteji mug zokudala. A Monologue ikhasi emithathu ukumemezela inkanyezi esizayo, wathandwa ihlombe izibukeli. Akumangalisi ukuthi uqhubeke ukuqeqesha abanamakhono insizwa wanquma amakilasi esebenza, ukuma ngesikhathi omunye iyunivesithi Tennessee.
Nakuba umfundi Leyn Devis namanje ephethwe ukumemezela ngokwaso njengoba umlingisi yaseshashalazini. Nokho, i-movie ne-TV uchungechunge njengoba izwe yayinelukuluku onamakhono nsizwa. Le phrojekthi TV lokuqala, ogama esizayo kokudubula, "kusho indodana uwoyela tycoon" wathatha ingxenye, kwaba uchungechunge oluthi "Izinsuku UkuPhila Kwethu" ezavela ezikrinini ngo-1981. Uhlamvu lokuqala eyadlalwa umlingisi iziqu zobudokotela nesimo esinzima, agodliwe nesizungu onothando.
Noma kunjalo, akubona udokotela, Evan waba iqhawe ngawo nomdlali imfundamakhwela kancane kancane waqala umhlaba wonke. Ngo-1984, Hunt Lane Davies wathola ithuba ukudlala entsha Mason Capwell teleromane "Santa Barbara." uhlamvu waso kwakuyindishi inzalo ka-Billionaire sothando esivela kumkakhe wokuqala. Mason uye uhlamvu eziyinkimbinkimbi captivates izethameli umuzwa omuhle kakhulu amahlaya, ngempumelelo usetha uqobo ngokumelene amanye amalungu omndeni.
Lo mlingisi izinkanyezi ku "Santa Barbara" iminyaka 5, futhi phakathi naleso sikhathi abalobi wamnika ezimbili elikhanyayo uthando izindaba owenza ababukeli 'namathela' esikrinini. Mason wahlangana abesifazane ababili ngokuphelele ezingafani - yindelakazi ezilwela amalungelo abesifazane.
Life emva "Santa Barbara"
Indodana Billionaire Capwell kwaba hero edume kunazo zonke, indima okuyinto esenziwa Leyn Devis. Izithombe ngesimo American Mason kungabonwa ngenhla. Ngo-1989, lapho enquma ukuyeka ukusebenzelana-up LA kuka kwehle kahle Abadali zayo. Abalobi "Santa Barbara" ngisho wathumela Lane umlingisi "ukuhlaba ikhefu" eside, okwenza esiqintini uhambo lwakhe ukuvakasha eside. Kodwa ekugcineni Capwell kudlalwa ngomunye umlingisi, izithameli umxhwele kakhulu.
Umlingisi Leyn Devis wachaza isifiso sakhe ukushiya ukukhathala TV phrojekthi. Ngemuva kokudubula ku "Santa Barbara", lapho isikhashana enikelwe ukuhamba ke ngaphindela emsebenzini. Inkanyezi yaseshashalazini wakhe siqu, ayedlala ngalo umculo omningi izindima abavelele yadalwa. Wabuye uyavuma ukubamba iqhaza telenovelas futhi ifilimu imikhiqizo.
Ikhono lakhe ukudlala scoundrels ebukekayo Davis waqinisekisa ngokwakha isithombe Tempus ochungechungeni oluthi "I-New Adventures Superman." Enye esiphawulekayo indima yayo - isiphathimandla komthetho Sommers kule midlalo ye-TV "Russian emzini yezingelosi." Kodwa kubalandeli iningi umlingisi wayengumuntu "Mason", ngisho noma uwela ngokucasuka lapho obizwa ngalelo gama.
Akukhona nje njengoba umlingisi onekhono, kodwa futhi njengoba kababa okhathalelayo labetibambile Leyn Devis. ukuphila Siqu baseMelika bazinza 1989, lapho eshada intombazane okuthiwa Holly. Kuyathakazelisa ukuthi ngaphambi abantu abasebasha bahlangana iminyaka 9. Davis uthi ukulahla impohlo imikhuba ungene imishado engokomthetho isinqumo, njengoba Holly iwine kuye umuzwa wakhe amahlaya. Kodwa isizathu sangempela kwaba ukukhulelwa likamakoti.
Okwamanje, futhi Layne Holley unamadodana amabili. Umlingisi ukuxoxa mayelana yamadodana akhe ngokuthi uNathani kanye kaThatcher, ukushaya izingane kuhlanganise bebodwa ukuphila azifezile ezinkulu, uthanda ukulalela uhleko yabo.
Theatre - akulona uthando kuphela empilweni, "Mason Capwell." Umlingisi ubumnandi ukwenza wokubaza, uyahamba ukudoba nabangani kanye nomndeni futhi Ukushushuluza. Ukufunda kusukela zisencane kuyinto yokuchitha isizungu intandokazi Lane, izingcezu esithandayo eyabhalwa Shakespeare. Davis othanda ukuba baphumule endlini encane, ise-San Bernardino Izintaba kude okumatasa komuzi.
Okwamanje, "indodana magnate amafutha" iminyaka 65, kodwa nge passion efanayo uyaqhubeka ukwenza yaseshashalazini, enza njengoba kumdlali, umkhiqizi, umqondisi. Izimpelasonto inkanyezi uncamela ukuchitha emkhayeni emincane.
"Wanyamalala" oyiNgisi Rozamund Payk. Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu Hollywood actress
Kosmacheva Julia Alexandrovna. actress Young Soviet
NoYekaterina Durova actress kanye indoda
Kuyini carbon monoxide? ukwakheka kwama-molecule
Ethandwa kakhulu ukuzivocavoca eziyisisekelo sawo esiningi